Baarlamaanka oo warbixin ka dhagaysanaya guddiyada Amniga iyo Difaaca | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Baarlamaanka oo warbixin ka dhagaysanaya guddiyada Amniga iyo Difaaca
Baarlamaanka oo warbixin ka dhagaysanaya guddiyada Amniga iyo Difaaca
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta warbixin ka dhageysanaya Guddiyada Difaaca iyo Amniga ee Baarlamaanka, kaddib markii Arbacadii la soo dhaafay su’aalo ka weydiiyeen arrimaha dhismaha ciidamada Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Inkastoo doodii kululeyd ee ka taagneyd Qorshaha Amniga Qaranka, gaar ahaan dhismaha ciidamada uu yaraaday, hadana waxaa lagu wadaa in Guddiga difaaca faah faahin ka bixiyo natiijadii ka soo baxday kulankii ka dhacay Villa Hargeysa.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka jawaabay Arbacadii la soo dhaafay su’aalo ay ka weydiiyeen arrimaha ciidamada guddiyada Difaaca iyo Amniga, waxaana uu meesha ka saaray Ra’iisul Wasaaruhu shakigii jiray.
Mooshinkan laga keenay qorshaha Amniga ayaa hada u muuqda mid hoos u dhacay, kaddib markii Madaxtooyada ay kala fur fur ku sameysay Xildhibaanadii waday, kaddib markii safarka Madaxweynaha lagu daray Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ahaa Guddoomiyaha Guddiga difaaca.
Baarlamaanka ayaa soo gaba gabeyn doona dooda mooshinkan, iyadoo todobaadkan uu geli doono fasax, lana soo xiri doono kalfadhiga koowaad ee baarlamanaka 10aad.
Shirka London ayaa lagu wadaa in la hor-geeyo qorshaha Amniga Qaranka oo dhigaya dhismaha ciidamo gaaraya 18-kun askari, kuwaasoo min 3-kun askari laga keenayo maamul goboleedyada.
Previous articleFaallo: Waa soo jireen xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga
Next articleWasaaradda Warfaafinta oo sheegtay in dib u eegis ay ku samaynayso xeerka saxaafadda dalka